High Quality စတိုင်ဒီဇိုင်း 17T အားလုံးသတ်မှတ်မည်ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ Derailleur စက်သီး
* SHIMANO DA9100 DA9150 R8000 R8050 transmission အတွက်သင့်တော်
* 11T လမ်းညွှန်ဘီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 45% ကွင်းဆက်ပွတ်တိုက်အားခုခံကယ်တင်သည်
* ကြွေ bearing ဗားရှင်း Ceramic Bead Bearing Version NSK Steel Bearing Version
* အလေးချိန်: 17: 55g
1. ပထမဦးစွာနောက်ဘက် derailleur ၏နောက်ကျောများတွင်စက်သီးဘီးလှောင်အိမ်၏ဝက်အူကိုရှာပါ။
2. T10 ဝက်အူလှည့နှင့်အတူဝက်အူဖယ်ရှားပါ။
3. ဝက်အူထွက် Pull ။
4. ဝက်အူများနှင့်နွေဦးမတိုင်မီစည်းဝေးပွဲကိုသစ်ကို 12-17T ကာဗွန်လှောင်အိမ် Remove နှင့်လူး။
5. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတွင်း၌နွေဦးကို fix အကြံပြု
အဆိုပါတွင်း၌နွေဦး 7.Push ။
8. လက်ယာရစ်လှောင်အိမ်လှည့်ခြင်းနှင့်နောက်ဘက် derailleur သို့တွန်း။ ရာထူးအတွက်သေချာ positi-oning post ကိုညာဘက်လုပ်သည့်အခါအားလုံး Push ။
9. အပေါက်ထဲမှာဝက်အူကိုပြန်တွန်းများနှင့် T10 ဝက်အူလှည့နှင့်အတူ fix ။
10. Finsh ။
ယခင်: Lightweight Portable Bicycle Wheel Hub Quick Release Skewers For MTB Aluminum Alloy Bike Front Rear Wheel Skewers Cycling Parts
နောက်တစ်ခု: 17TR အဆမတန်ကြီးမားစက်သီးဘီးစနစ်
လူမီနီယမ်အလွိုင်း Derailleur စက်သီးဘီး
dual Vee လမ်းညွှန်ဘီး
လမ်းအတိုင်းစက်ဘီးစီးနောက် Derailleur စက်သီးလမ်းညွှန်ဘီး
V ကို Groove လမ်းညွှန်ဘီး
V ကို Groove လမ်းညွှန်ဘီးဝက်ဝံ